२०७१ पुस १९ गते शनिबार | Saugat : Naya Yougbodh
२०७१ पुस १९ गते शनिबार
फुचुंग्री : काकाले सुन्नु भो ? हुँदा–हुँदा त अब संविधानका लागि युवा सभासद्हरुले नै दबाब दिने रे ? संविधान बनाउन गएकाहरुले खुरुखुरु संविधान बनाउनुपर्छ कि दबाब दिन थाल्ने हो हँ ?
काका : बिचरा तेरा सभासद् अङ्कलहरु पनि के गरुन् त ? दुई÷तीनवटा हात्ती पार्टीका हात्ती नेताहरुको जिम्मा लगाइएको छ सबै कुरा । तेरा सभासद् अङ्कलहरुको त कामै नेताले भाषण गरेपछि थपडी बजाउने पो भयो । त्यै भएर युवा सभासद्हरुले पनि यस्सो जोश देखाएका होलान् नि त ।
फुचुंग्री : हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील दा’ले त प्रक्रिया छोट्याएरै भए पनि माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने भनेछन् । बूढाले गरिखालान् ए ?
काका : अघिपछि बूढाहरुलाई गफ मारेर बस्नै ठिक्क छ । माघ ८ मै संविधान ल्याउने भए प्रक्रिया नछोट्याएर के गर्ने त ? छोट्याउनै त प¥यो नि ।
फुचुंग्री : अनि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि कति हेपेका है काका ? अब संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मा मलाई दिनुस् भनेर पो भन्न थालेछन् त बूढाले ।
काका : तेरा नेता अङ्कलहरुले पनि हेपिमाग्ने त कामै गर्छन् । पहिलो संविधानसभा काम गर्न नसकेर भङ्ग नै भो । दोस्रोले पनि काम गर्लाजस्तो छाँट छैन । शीर्ष नेताहरुले गर्ने भए गरिहाल्थे । बरु तिनै तेरा नेम्वाङ अङ्कलले बनाइहाल्थे होलान् जस्तो पो लाग्न थाल्यो फुच्ची म बूढालाई त ।
फुचुंग्री : अनि नेपालको अन्तरिम संविधानले नै हिन्दूराष्ट्र भन्ने कुरा हटाइसक्यो । तर यो राप्रपा नेपालका कमल थापा अङ्कलले त हिन्दूराष्ट्र फर्काउने भनेर आन्दोलनै थाल्ने रे । कस्ता गएगुज्रेका रै’छन् हँ यी अङ्कल ?